ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba epheleleyo yebhola yeGlaus eyaziwayo ngegama; "I-New Thuram". Ibali lethu laseBenjamin ePard Childhood kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukusuka kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngegama lakhe leNkcazo yeHlabathi ye-2018 kunye nokungahambelani kuzo zonke izikhundla ezikhuselayo. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa ngeBio Pavar's Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBrazil Facts -Obomi bakwangoko
Iqhawe laseFransi elipheleleyo, uBenjamin Pavard wazalwa ngo-28 Matshi 1996 eMaubeuge, Nord, eFransi. Wakhulela ekuthomeni ngokuthobeka ngabazali bakhe abathandekayo aboniswe ngezantsi.
Uthotho lwaqala ukuthobeka, uyise kaPavard wabeka isiseko somntwana wakhe othandekayo. Njengoko uBenjamin Pavard ebeka;
'Umhlobo wam obalaseleyo wayedla ukundithabatha yonke imihla kwaye yingako ndayifaka emzimbeni wam. Kwakungekho namathoyizi okanye imidlalo xa ndiselula, nje ngebhola. Ndiyabulela gqitha into endiyenzayo. Uba utatalela Ngaphandle kwakhe, andizange ndibe nohambo oluhle kakhulu kum.
UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBrazil Facts -Ulwalamano lobomi
Ngaphandle kokungathandabuzeki, inkwenkwezi yeNdebe yeHlabathi yeFIFA ye-2018. Ikhono lokudlala likaPavard kunye nokukwazi, kwakunye nokuphila kwakhe ngaphandle kwendawo, yakha umfanekiso opheleleyo.
Njengoko ngexesha lokubhala, uRachel Legrain-Trapani echazwe ngezantsi ngu-intombi kaBenjamin Pavard.
Emva kokuqala ukugcina ubudlelwane babo ngaphantsi kwe-wraps, uLegrain-Trapani kunye noPavard bahamba esidlangalaleni ngokuthandana kwabo ngoMeyi 2018. ULegrain- Trapani nguye owayengumceli-mhlaba onguhle (Miss France, 2007).
Ama-Asides ahamba esidlangalaleni malunga nolwalamano lwawo ngaphambi kweNdebe yeHlabathi ye-2018, uRachel Legrain-Trapani wabamba amehlo kwihlabathi eliye lazi ukuba ngumfazi weParard ngexesha leFrancis ye-4-3 ukunqoba kwi-Argentina kwi16 yokugqibela yaseRussia 2018. Wayekhangela ngokungenakuqhathaniswa nenqabileyo njengoko wayenomdla ebusweni bakhe.
Bobabini abathandi nandipha ubuhlobo obuqinileyo obakhelwe ngobuhlobo. URachel uneminyaka engama-7 ubudala kunomntu wakhe onokubonakala kuye ngaphandle kokubonakala kwamehlo.
Nangona kunjalo, ubonakala enhle ngokwemvelo njengoko kubonakaliswe kwisithunzi esingezantsi. Ubuhle bemvelo bukaLegrain- Trapani bungaba isizathu sokuba uFrance France 2007 aphumelele kwaye kutheni uBenjamin Pavard wamthanda.
UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBrazil Facts -Okunye malunga neNtombi yakhe, iLegrain-Trapani
Ubuhle be-brunette, umdlali onomdla ngokwakhe, uyaziwa ukuba wayebuhlobo obunzulu obuphathekayo, enokuba neenkwenkwezi zezemidlalo. Ukususela kwi-2007-2009, uLegrain-Trapani wayenomdla kakhulu u-Ladji Doucouré, iqhawe lomhlaba wezemidlalo.
Kwi-2013 watshata nomdlali wase FC Nantes u-Aurélien Capoue kumtshato we-showbiz kwi-Abbey yaseSaint-Florent-le-Vieil.
Kwi-2016, loo mabini abiza ixesha ngexesha lomtshato kwaye ubuhle be-2007 Miss French babuyela kwimarike kwakhona. Emva kokuqala ukugcina ubudlelwane babo phantsi kwe-wraps, iLegrain-Trapani kunye IPavard yahamba esidlangalaleni kunye nomtshato wabo ngoMeyi 2018.
Ngokuphathelene nemiphumo yakhe: URachel Legrain-Trapani uyintombi yamaTaliyane abafudukela e-Saint-Saulve ngo-Agasti 31, 1988. Abazali bakaRakeli bahlukanisa xa wayesengumfana. Umama wakhe, uSilvana obhala unobhala wamvusa uRakeli konke ngaye. Unabantakwabo ababini abazalwana abakwaRuben noMelvin. Ukujonga isithombe esezantsi, awukwazi ukuba ngubani na unina nentombi.
UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBrazil Facts -Career Buildup
Ngonyaka we-2002, xa uPavard eneminyaka eyi-6, intshutshiso yakhe yebhola yambona ebhalisa kwikomiti yelutsha lendawo, i-US Jeumont eyamnika isigaba sokubonisa iitalente zakhe.
Ngeminyaka eyi-10, abazali bakhe bacinga ukuba bathuthele unyana wabo kwisikolo esikhulu sebhola. Ngenxa yokuba befuna ukuba unyana wabo aye esikolweni sokubhankanya kuloo minyaka, bobabili abazali baqala ukufuna isikolo esasiza kuvumela iPavard ukudlala ibhola elikhuphisanayo. Isikolo sebhodi kufuphi nesikolo sebhola yebhola yebhola yabazali bakhe bakhethwayo. IPavard kwafuneka aye kwiimvavanyo ezisuka eLille academy eyadlula kuyo. Njengoko uBhenjamin ebeka;
Ndashiya ekhaya kakhulu kusasa. Abazali bam bahamba ngeekhilomitha eziliqela baye beza kundibona. Andiyi kukwazi ukubongelela ngokwaneleyo into endiyenzele yona.
Ngethuba eliseLille, iinjongo zikaBenjamin Pavard zokuhamba yayingeyona nto idlula. Emuva kwangoko, wayenomdla ukuzimisela okwenza ukuba amaphupha akhe amakhulu aphumelele emva kokuchitha iminyaka eyi-10 esikolweni.
UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBrazil Facts -Isishwankathelo somSebenzi
Emva kokuvela kwamaxesha e-25 eLille ngaphezulu kweeveki ezimbini, uPavard waqala ukuziva engenakho ithemba kumdlali ngenxa yokungahambi kwebhola yebhola lokuqala. IPavard yashiya iqela ukujoyina iStuttgart kwi-2016. EJamani, uPavard wayevakalelwa kakhulu ekhaya. Wazisa kakhulu umnwabo kumama wakhe nobaba (okuchazwe ngezantsi) xa ekhokela iqela laseStuttgart ukuphumelela ukunyuswa kwiBundesliga kwixesha le-2016 / 17.
Indoda yesiFrentshi yayinandipha ubomi eJamani apho yakufumanisa khona ithemba elingekho eLille. Ngamazwi akhe;
"Yonke into iyafaneleka. Esi sixeko sinikela ngokubanzi, le midlalo ihlala igcwele, kwaye ndivakalelwa kukuba umqeqeshi, i-teammates kunye nebhodi, "
UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBrazil Facts -Ukunyuka Kwigama
Ngaphambi kweNdebe yeHlabathi ye-FIFA ye-2018 eRashiya, amandla kaPavard ekujonganeni nodumo lweqela lakhe iVfB Stuttgart yayilungelelanise ngqo nokukwazi kwakhe ukuphatha ibhola. Xa uPavard wabizelwa kwiqela elizwe laseFransi eliphambili ngexesha lokuqala kwi2017, wayenekhefu lesidlo sasemini emva kokufunda isiJamani kwaye akazange aqaphele ukuba ulahlekelwe iifowuni ezivela kubazali bakhe.
Umkhuseli waseFransi wabiza abazali bakhe waza wakhala iinyembezi zovuyo xa behambisa umyalezo ovuyisayo kuye. Akuzange kuthathe ixesha elide ngaphambi kokuba abuyele ekhaya ukuze axoxe kunye nomama wakhe noyise.
Yonke imibingelelo awayenzayo ukususela ekubeni yinkwenkwe ekugqibeleni ihlawulwe eRussia 2018 yeFIFA yeHlabathi yeNdebe. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye neNgcaciso yeBrazil Facts -Iimpawu zobuqu
UBenjamin Pavard nguye yedwa umntwana wabazali bakhe. Akanayo umzalwana okanye udade. Ukujongwa kwentsapho yakhe kubonisa ukufana okufanayo phakathi kwePavard nonina.
IPavard iyaziwa ngeenwele zakhe ezibukhali kunye nebhola lebhola yamandulo. Uye waqanjwa ngokuthi "Jeff Tuche"Ngabafundi bakhe baseFransi emva kokuba ubaba onobubele obunomxholo wechungechunge lwamafilimu amaFrentshi"Les Tuches. "
UBenjamin Pavard uye wacinga ngokucacileyo umsebenzi wakhe ngokubunjwa ngumcebisi wakhe, owayengumFrentshi wamazwe ngamazwe ULilian Thuram. UBenjamin Pavard uchithe ixesha elide lokufunda kumcebisi wakhe
QHUBEKA: Siyabulela ngokufunda ibali lethu leBarvin Pavard yabantwana kunye neenkcukacha ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
Iindaba zeNabil Fekir yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts